I-CPTAU uthotho lwe-bimetallic cable lugs
I-DTL-4 pre-insulated bimetallic lugs isetyenziselwa ukumisela unxibelelwano phakathi kweentambo ze-LV-ABC kunye nezixhobo zombane. Isundu senziwe nge-99.9% sobhedu olusulungekileyo kwaye umkhono wenziwe nge-99.6% yealuminiyam emsulwa. Icandelo elinqamlezileyo lomqhubi linokuluka Ikhowudi yombala wesazisi ichonga ngokulula iringi e-elastic kunye negrisi esele igcwalisiwe ukuyenza ingangeni manzi. Uvavanyo lokuqina kwamanzi lwenziwa kwi-6KV phantsi kwamanzi okomzuzu omnye. Umbhobho wokugquma wenziwe nge-polymer enganyangekiyo yemozulu kunye ne-UV.
Izihlanganisi zeetheminali zisetyenziselwa ukuqhagamshela umqhubi wempompo kwizixhobo zombane (isiguquli, ikhefu lesekethe, umaphuli wesekethe, ucime umbane, njlnjl.) Izihlanganisi zeAluminiyam zikwasetyenziselwa ukuqhagamshela umqhubi wempompo yesixhumi se-T. Izihlanganisi zibandakanya uhlobo oludibeneyo kunye ne-bolted, zombini ezi ntlobo zinekona le-0 ° 30 ° kunye ne-90 ° kwicala lomqhubi wetephu.
I-DT isebenza kunxibelelwano lweengcingo kwizixhobo zokuhambisa umbane kunye nezixhobo zombane. Yenziwe nge-T2 ityhubhu yokubambisana nge-die cast kunye ne-tin camera.
I-SC (JGY) Itheminali zeCopper eziDibanisa iTyhubhu
IJGY iCopper Crimp Lug? yenziwe ngeepesenti ezingama-99.9 eziphezulu ityhubhu yobhedu emsulwa T2 kwaye yambathiswe ngetini. Iqondo lobushushu elisebenzayo -55 ℃ -150 ℃.
I-JGY Copper Crimp Lugs zikulungele ukudityaniswa kwabaqhubi bezobhedu (icandelo 1.5-1000mm2) kwikhebula lombane nezixhobo zombane.
I-DTL uthotho lwesiphelo sendibaniso ye-Al-Cu ilungele utshintsho lwendibaniselwano yesixhobo sokuhambisa intambo yeAluminiyam kunye nezixhobo zombane. I-DL Aluminium isetyenziselwa ukudibanisa i-Aluminium ye-Aluminium engundoqo yekhebula kunye nezixhobo zombane. Indawo yokugcina ubhedu ye-DT isetyenziselwa itekhnoloji yobhedu edibanisa intambo yobhedu kunye nezixhobo zombane. Iimveliso zamkela ukukhuhlana kokuwelda umsebenzi, Inkampani yethu inikezela ngeCu-Al terminal kunye nocingo lwentambo olwenziwe ngobuchule bokutshata. Iimveliso zinempawu njengamandla aphezulu e-welding, iipropathi zombane ezigqwesileyo, ukumelana nokubola kwe-galvanic, ubomi benkonzo ende, ukungaze kuphuke, ukhuseleko oluphezulu, njl.